Xawaaladda TAAJ oo Xafiis Cusub ka Furatay Magaaladda Qardho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Xawaaladda TAAJ oo Xafiis Cusub ka Furatay Magaaladda Qardho[Sawirro]
Xaflada lagu soo bandhigayay furitanka xafiiska TAAJ ee Qardho ayaa lagu qabtay xarunta hotel guffure waxana ka soo qayb galay masuuliyin ka socday shirkada GOLIS ,Maamulka Gobolka, Maamulka Degmada , Aqoonyahano nabadoono ,iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markhanti ka ahaayeen furitanka xawaalada TAAJ .
Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Shiikh Axmed Cawaale oo ah maamulaha GOLIS ee Gobolka Karkaar waxana uu sheegay in xawaladu wax wayn u tarayso bulshada oo lacagaha looga soo diri karo dalka dibadisa iyaguna u dirsan karaan .
Shiikh Axmed Cawaale
Axmed Cawaale ayaa afka ku dhuftay in isticmalka TAAJ uusan kaaga baahnayn in aad tagto Xafiiska xawaalada lkn adigoo gurigaaga jooga lacagta laguu soo diri karo adna aad diro karto .
Cumar Faruuq oo ah hogaanka ganacsiga ee GOLIS ayaa xaflada ka sheegay in GOLIS ay horay u soo kordhisay adeegyo ay kamid ahaayen Bankiga Salaam iyo kuwo kale waxana uu sheegay in TAAJ ay kamid tahay adeegyada u dambeeyay ee golis soo kordhisay .
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Quraan Maxamed Adan oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ay aad ugu macahcelinayaan Shirkada GOLIS waxana uu sheegay in golis ay tahay shirkad ku dayasho mudan markastana u taagan horumarinta adeegyada ay ugu adeegayso bulshada .
Dhamaan dadkii soo xaadiray munaasabada ayaa sheegay in xawaalada TAAJ ay soo dhowaynayaa iyagoo sheegay in ay xawaaladu u fududaynayso in lacago u dirsadaan dalka dibadiisa iyagana looga soo diro ,
Ugu dambayn waxaa munaasibada lagu soo bandhigay abaalmarino kala duwan oo ay shirkadu ugu tala gashay shacabka waxana abaalmarinada lagu helay bakhtiyaa nasiib kala duwan oo ay dadku aad ugu farxeen qof walba wixii ku soo aaday.